ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု - ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
dev Psychobiol ။ 2010 Apr;52(3):263-76. doi: 10.1002/dev.20442.
Pennsylvania ပြည်နယ်၏ Annenberg ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒရေးစင်တာတက္ကသိုလ်, 202 အက်စ် 36th လမ်း, Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး 19104, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် ထကြွလွယ်သော ၏အကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီမှုအခြေခံ စွန့်စားမှု ယူ ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည်နှင့်ဤအပြုအမူ၏အရှိဆုံးအန္တရာယ်ရှိသောပုံစံများအချို့နှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် ထကြွလွယ်သော အစောပိုင်း၌ထင်ရှားဖြစ်ကြောင်းစရိုက်များ တိုးတက်ရေး။ သို့သော်အစောပိုင်းကြားဝင်ထိုကဲ့သို့သောပညာရေးအောင်မြင်မှုအဖြစ်တန်ဖိုးထားရည်မှန်းချက်များ, ဆီသို့အပြုအမူနှင့်ဇွဲကျော်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ထိုအစရိုက်များ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပေါ်လာပါသည်။ တစ်ခုမှာပုံစံ ထကြွလွယ်သော, အာရုံကိုရှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာမှအန္တရာယ်များကိုတိုးပွါး တိုးတက်ရေး။ သို့သော်ကြောင်းန့်အသတ်အတွင်းအယူအဆများအတွက်အထောက်အထားများ, တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ် ဦးနှောက် တိုးတက်ရေး မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကန့်သတ်ရန် ထကြွလွယ်သော မဆိုဤကဲ့သို့သောကန့်သတ်မှာအကောင်းဆုံးသိမ်မွေ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဲဒီအစားသူကဝတ္ထုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းတာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်စေကြောင်းစောဒကတက်တာဖြစ်ပါတယ် စွန့်စားမှု အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုထက်မြီးကောင်ပေါက်မှ ဦးနှောက် ရငျ့။ ဆက်လက် Translational သုတေသနသူတို့လူကြီးမှပြောင်းလဲအဖြစ်လူငယ်ကာကွယ်ပေးကြောင်းမဟာဗျူဟာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါမည်။
ဦးနှောက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ရငျ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပုံ-သာလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်သီအိုရီအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါဆယ်ကျော်သက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှအချိုးအစားမမျှမထိခိုက်လွယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါလမ်းနားသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်လော့။ ထို့အပြင်သုတေသနဝတ္ထုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းမရှိခြင်းတို့သည်ကြီးစွာသောအန္တရာယ် (Romer, 2010) ဖြစ်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှုထောင့်ရဲ့ကြယ်စုဖွယ်ရှိကုသိုလ်ယူဖြစ်ပြီး, အမြင်တွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သုတေသနဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ၏အံ့သြဖွယ်ကြီးထွားကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပတ်သက်. ထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိချက်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်Giedd, Blumenthal, Jeffries, Castellanos, လျူ, Zijdenbos, et al ။ , 1999; Sowell, Thompson က, Tessner, & Toga, 2001) ။ အဆိုပါဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအထင်ကြီးတွေ့ရှိချက်အ prefrontal cortex (PFC) ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရငျ့နှင့် parietal ဒေသများမဆိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာအသက်အရွယ် 11 န်းကျင်, အ PFC နှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်အတွက်ရရှိလာတဲ့အာရုံခံ axon ၏ကြာရှည်တံစဉ်များကိုတစ်ဦးကာလကိုစတင်ပုံရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အာရုံခံ myelination တစ်ခုတိုးဖြစ်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤအရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲ၏အရေးပါမှုသေးထူထောင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ သို့သော်များစွာသောသုတေသီများ PFC ၏ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာတံစဉ်များကို Impulse နှင့်ဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောမရှိခြင်း, အပြုအမူအပေါ်ကြီးထွားလာတိုကျရိုကျထိန်းချုပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းစောဒကတက်ကြသည်။ အမှန်မှာမြီးကောင်ပေါက်ရှည်လျားအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအားဖြင့်ပုံအော, ရည်ရွယ်တဲ့ဒဏ်ရာ (အထူးသဖြင့်ကားတစ်စီးမတော်တဆမှု) ကဲ့သို့၎င်း, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု (မှအလွန်အကျွံကျရောက်နေတဲ့အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြArnett, 1992).
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အပြုအမူသည်ဤပုံစံများအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောစည်းကမ်းများကိုထံမှသုတေသီများအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse ဖို့ဆယ်ကျော်သက် predispose ကြောင့်ဦးနှောက်ရငျ့၏ Two-ဖြစ်စဉ်များအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပေါ်ထွက်လာကြောင်းတစ်ခုမှာလုပ်ငန်းစဉ်သည် (ထို ventral striatum (ဥပမာ, အနျူကလိယ accumbens) ပါဝင်သော frontostriatal ဆုလာဘ်ဆားကစ်များကမောင်းနှင်နေသည်Casey, Getz, & Galvan, 2008; Chambers, တေလာ, & Potenza, 2003; သွပ်ရည်စိမ်, Hare, Parra, Penn, Voss, ဂလိုဗာ, et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားဆားကစ် (အတော်လေးအစောပိုင်းရင့်ကျက်Fuster, 2002) နှင့်ဝေးမိသားစုမှ ပို. ပို. ဝတ္ထုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့လှုပ်ရှားမှုများဆီသို့စွဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအားပေး (လှံ, 2007) ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဤလှုပ်ရှားမှုများအများအပြားစွန့်စားမှုတစ်ခုအခြို့သောငွေပမာဏကို (ဥပမာကားမောင်း, လိင်) နဲ့စရာတွေရှိပါတယ်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဝတ္ထုနှင့်အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်က PFC သေးအန္တရာယ်များကိုလုံလောက်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ပြီးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေထိန်းချုပ်လုံလုံလောက်လောက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအမှတ်ရင့်ကျက်သေးပါဘူးကြောင်းစောဒကတက်သည်။ အထူးသဖြင့်, ထို PFC နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်အကောင်းဆုံးကြောင်းကိုထိန်းချုပ်မှုများကိုဖွဲ့စည်းပုံမလုံလောက်ဖြစ်ထင်နေကြသည်။ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry မှ PFC-based ကိုထိန်းချုပ်ဆွေမျိုးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒါဟာရင့်ကျက်ကွာဟမှု (ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အန္တရာယ်တစ်ခုမလွှဲမရှောင်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ဟုကာဇီ et al ။ , 2008; Nelson, Bloom, Cameron, Amaral, Dahl, & Pine, 2002; Steinberg, 2008) ။ ထို့အပွငျက (Steinberg, ဒီပြဿနာကိုကြည့်ပါ) အားနည်းချက်၏ဤကာလလျှော့ချရန်ကြားဝင်မလွှဲမရှောင်အလွန်ကန့်သတ်ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်။
ဤစာတမ်း၌ငါဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ထကြွလွယ်သောလုပ်ဆောင်ချက်၏အဓိကသတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုအမြိုးမြိုးဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်။ တဦးတည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ဆက်ရှိနေသေးကြောင်းအသက်တာ၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ထင်ရှားကြောင်း Impulse တစ်ဦး Pre-တည်ဆဲပုံစံ (ကအနည်းဆုံးအသက် 3) ဖြစ်ပါသည်။ အန္တရာယ်၏ဤအရင်းအမြစ်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည် Moffitt's (1993) “ ဘဝလမ်းကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်” ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်ပက်တာဆန်၏ (Patterson, Reid, & Dishion, 1992) "အစောပိုင်း starter" လမ်းကြောင်းကို။ အန္တရာယ်၏ဒုတိယအရင်းအမြစ်ဟာ ventral striatum (၏ activation ထံမှရလဒ်များကြောင့်အာရုံရှာထဲမှာမြင့်တက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကုန်သည်များ et al ။ , 2003; လှံ, 2009) ။ ပြီးသားမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်, ဒီပြောင်းလဲမှုဝတ္ထု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့) အပြုအမူနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အားပေး။ သို့သော်မဟုတ်ဘဲတိုကျရိုကျထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကိုယ်စားပြုထက်အဲဒီအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသဘောထားတွေကိုပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်, ဤဝတ္ထုအပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျးနဲ့ဆက်စပ်အတွေ့အကြုံကို၏မလွှဲမရှောင်မရှိခြင်းပိုပြီးရလဒ်ဖြစ်စောဒကတက်နေကြသည်။
ဤဆင်ခြေအတုလုပ်တဲ့အတွက်ကျနော်ပထမဦးဆုံး Impulse ၏အစောပိုင်းသရုပ် ပတ်သက်. သက်သေအထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်မည်သို့ကလေးဘဝကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံ, စိတ်ဖိစီးမှုများအထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ, သူတို့ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်အဖြစ်အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အချို့သောလူငယ် predispose လိမ့်မည်။ ဒါကသက်သေအထောက်အထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတဲ့အဓိကအရင်းအမြစ်ကတော့ဆယ်ကျော်သက်ကာလ precedes ကြောင်းချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ရလဒ်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတဲ့ယူနီဖောင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းမရှိ, တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာလွှမ်းမိုး။
ထကြွလွယ်သောနှင့်ချို့တဲ့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လူကြိုက်များစရိုက်လက္ခဏာတွေနေသော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. သက်သေအထောက်အထားများပိုမိုပျော့ပြောင်းပုံတစ်ပုံကိုအကြံပြုထားသည်။ ကျနော်တို့အန္တရာယ်အပြုအမူဘယ်နေရာတွေမှာ၏မကြာသေးမီ longitudinal လေ့လာမှုများကိုကြည့်ပါလျှင်, ငါတို့သည်သိသိသာသာတသမတ်တည်းပုံစံကိုကြည့်ပါ။ ဆီယက်တဲလ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (ထံမှဥပမာ, Bing အရက်သောက်ဖို့ကိစ်စတှငျ, ဒေတာHill, White, Chung, Hawkins, & Catalano, 2000) တွင်ပြသ ပုံ 1 အစားဆယ်ကျော်သက်ကာလတစ်လျှောက်တစ်ယူနီဖောင်းတိုးပြခြင်းထက်, ဒီအပြုအမူများအတွက်ကြီးစိုးပုံစံအထဲတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မဟုတျကွောငျးဖော်ပြသည်။ ကြောင်းဆောင်များတွင်အတွက်လူငယ်၏အကြောင်း 70% မျှမမူးရူးသောက်စားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အသက်3မှာမူးရူးသောက်စားမြင့်မားမှုနှုန်းပြသူအသက် 13 အထိဤလမ်းကြောင်းအတွက်ဆက်ရှိနေတဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးအုပ်စုငယ် (18%) ရှိခဲ့သည်။ လူငယ်တစ်ဦးကိုတတိယအုပ်စုသည် (4%) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမူးရူးသောက်စားအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စတင်ခဲ့ပြီးစတုတ္ထအများကြီးပိုကြီးတဲ့အုပ်စုတစု (23%) အသက်အရွယ် 18 မှာနောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ကနေခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနျပုံနှိပျဆီယက်တဲလ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (အတွင်းအကဲဖြတ်အဖြစ် Bing အရက်သောက်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ ဟေးလ် et al ။ , 2000).
တစ်ဦးကဖြစ်ကောင်းပိုပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်အပြုအမူ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဖြင့်လေ့လာခဲ့ခဲ့သည် Nagin နှင့် Tremblay (1999) Montreal high-အန္တရာယ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အထီးလူငယ်သူတို့ရဲ့ဆောင်များတွင်ပါ။ တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ပုံ 2ပင်ဒီအမြင့်မားသောအန္တရာယ်ဆောင်များတွင်အတွက်လူငယ်၏ကြီးမားသောအချိုးအစား (17%) ရန်လိုသည့်အပြုအမူအတွက်စေ့စပ်ဘူး။ သို့သော်အစောပိုင်းအသက်အရွယ် (80%) မှာပြုသူအများအပြားလူငယ်သူတို့အသက်ကြီးသောကျူးကျော်များ၏ကျဆင်းနေနှုန်းထားများပြ။ ဤရွေ့ကားပုံစံများခဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအားနည်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏သက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျး, Bing သောက်သုံးရေနှင့်ဝသကဲ့သို့, လူငယ်တစ်ဦးအုပ်စုငယ် (4%) အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်ကျူးကျော်မြင့်မားခြင်းနှင့်ဇွဲနှုန်းထားများပြခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ဤလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်။
ကနေခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနျပုံနှိပျ Montreal (မြင့်မားအန္တရာယ်ရပ်ကွက်အတွက်အကဲဖြတ်အဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူဘယ်နေရာတွေမှာလဲ Nagin & Tremblay, 1999) ။ အနိမျ့ (17%), အလယ်အလတ်ရပ်တန် (52%), မြင့်သောရပ်တန် (28%), နဲ့နာတာရှည်: လေးဘယ်နေရာတွေမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ ...
ဤပုံစံများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မီအစောပိုင်းနှစ်များအတွင်းစွန့် စား၍ မကောင်းသောလိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်ခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို Moffitt နှင့် Patterson ၏အဆိုပြုချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အမှန်မှာ၊ ဤအသက်အရွယ်အနေအထားကဆယ်ကျော်သက်များသည်အန္တရာယ်ကြီးမားသောအပြုအမူများနှင့်တစ်ပုံစံတည်းမပါဝင်ကြောင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မတိုင်မီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအန္တရာယ်များသောကြီးထွားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏သေးငယ်သောအချိုးအစားကဖော်ပြသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ, Biglan နှင့် Cody (2003) 18 မှလူငယ်အသက်အရွယ် 12 ၏ 20% အရက်မူးကားမောင်းခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှုဖမ်းဆီးမှုများ၏ 88% လောက်သုံးပုံနှစ်ပုံများအတွက်မှတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ်ယူအတွက် Impulse ၏အခန်းကဏ္ဍကို
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (အဖြစ်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်3အဖြစ်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအဖြစ်အစောပိုင်းအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုလူငယ်, ပြပွဲအဆင့်မြင့်ကြောင်းအကြံပြုCaspi & ဆေးလ်ဗား, 1995; Caspi, ဟင်နရီ, McGee, Moffitt, & ဆေးလ်ဗား, 1995; Caspi, Moffitt, Newman, & Silva, 1996; Masse & Tremblay, 1997; Raine, Reynolds က, Venables, Mednick, & Farrington, 1998) ။ အမှန်စင်စစ်အပြုအမူ externalizing ၏တစ်ခုလုံးကိုလှိုင်းထကြွလွယ်သောစရိုက်များ (တစ်အမာခံထားနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံပေါ်Kreuger et al ။ , 2002) ထို (အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထင်ရှား၏McGue, Iacono, & Kreuger, 2006) ။ ဒါကသက်သေအထောက်အထားမြီးကောင်ပေါက်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ပြဿနာအပြုအမူကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုလူငယ်၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း ( cf. အတွက်ပြွတ်သောစိတ်ကူးကိုတဖနျထောက်ခံဖြစ်ပါသည် Biglan နှင့် Cody, 2003).
Impulse ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာသို့သော်ကစိတ်သဘောထား multidimensional ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းရိုအဖြစ်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မမူကြောင်းကိုအသိအမှတ်မပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဲဒီအစား, ကအနည်းဆုံးသုံးအလားအလာလွတ်လပ်သောပုံစံများအတွက်ထငျရှားပါသညျ။ ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည့်တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောရို, စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲသရုပ်ဆောင်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်စဉ်းစားသို့မဟုတ်အာရုံကို၏သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲ hyperactivity ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုအနည်းဆုံး Self- report ချိန်ခွင်နှစ်ခုဖြင့်တွက်ချက်သည်။ Barratt Impulsivity Scale ၏ motor impulsivity subscale (Patton, Stanford, & Barratt, 1995) နှင့် Eysenck ငါ7 စကေး ​​(Eysenck & Eysenck, 1985) ။ လေ့လာသူအစီရင်ခံစာအားဖြင့်အကဲဖြတ်သောအခါ, ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) (ကလေးတွင်ပြအဖြစ်, ထိန်းအကွပ်မဲ့များနှင့် hyperactive စိတ်ထားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Barkley, 1997).
စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲသရုပ်ဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြဿနာများအတွက်အစောပိုင်းအန္တရာယ်၏ neurobehavioral သီအိုရီ၏အာရုံတစ်ခုဖြစ်သည် (Tarter et al ။ , 2003; Zucker, 2006) ။ ထိုကဲ့သို့သောရပ်တန့် signal ကိုတာဝန်များကိုအဖြစ်တုန့်ပြန်တားစီး၏အတိုင်းအတာပေါ်မှာဤစိတ်ထားအာရုံတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုစမျးသပျမှုကိုအသုံးပြုဖို့သူအသုတေသီများ, (Williams, Ponesse, Shachar, Logan, & Tannock, 1999) ။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကိုအရေးယူမှုမှကွဲလွဲတွေကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့မရှိတော့သပ္ပါယ်အခါ prepotent တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ထားသည်။ ကလေးငယ်များအတွက်တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အာရုံကိုတစ်ဦးလွှမ်းမိုးအာရုံစိုက်ပါ (Flanker တာဝန်) ခြမ်းကြောင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတွေကိုပါဝငျသညျ။ ADHD နှင့်အတူကလေးများထိုကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုအပေါ်လျော့နည်းကောင်းသောအမှုကိုပြု (Vaidya, Bung, Dudukoric, Zalecki, Elliot, Gabrieli, 2005).
Impulse ၏ဒုတိယပုံစံပြဖို့စိတ်သဘောထားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် စိတ်မရှည်ခြင်း လာသောအခါပိုကြီးတဲ့ဒါပေမယ့်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ချင်းသေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦးရှေးခယျြမှုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာမကြာခဏနှောင့်နှေးဆုလာဘ် (များအတွက်ဦးစားပေးများတွင်ကွဲပြားမှုကိုတိုင်းတာနိုင်မယ့်နှောင့်နှေးလျှော့ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအကဲဖြတ်နေသည်Ainslie, 1975; Rachlin, 2000). Mischel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (1988) အသက်အရွယ်4သကဲ့သို့ကလေးငယ်များထိုကဲ့သို့သော marshmallows တရံအဖြစ်သွေးဆောင်အားရစရာလက်ခံရရှိရန်စောင့်ဆိုင်း၏တာဝန်ပေးထားခဲ့ပြီးသောအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းအချိန်ကနှစ်ခုခံယူနိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတဦးတည်း marshmallow ငြင်းပယ်နိုင်သူများသည်ကလေးများသည်းခံခြင်းပြအဖြစ်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ, ဒီတာဝန်အပေါ်ကောင်းစွာသွင်းယူသူကိုသားသမီးများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့သောညွှန်ကိန်းများအပေါ်သည်းခံခြင်းပြမှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အခွားသောသုတေသန (သည်းခံခြင်းကင်းမဲ့သူကိုမြီးကောင်ပေါက်လည်းအတူစမ်းသပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့ကပိုများပါတယ်ကွောငျးဖျောပွသခ Reynolds က, 2006; Romer, Duckworth, Sznitman, & Park, 2010).
ကိုယ့်စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲသရုပ်ဆောင်အဖြစ်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, နှောင့်နှေးလျှော့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နှင့်အိုင်ကျူအလုပ်လုပ်အတွက်အပြောင်းအလဲဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Shamosh, DeYoung, အစိမ်းရောင်, Reis, ဂျွန်ဆင်, Conway, et al ။ , 2008) ။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့ချက်ချင်းနှောင့်နှေးဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်တဲ့အခါအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ဝေးလံသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အားနည်းစွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှောင့်နှေးဆုလာဘ်လျော့ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အားနည်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအကြားနဲ့ Impulse ဤပုံစံများကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုအသင်းအဖွဲ့ထကြွလွယ်သောအပြုအမူမကြာခဏအပြုအမူအပေါ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးချို့တဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းပေးထားအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အားနည်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲစိတ်မရှည်ခြင်းနှင့်သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးစလုံးအခြေခံဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးထံမှသက်သေအထောက်အထား (Impulse ဤပုံစံများလွတ်လပ်သောဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြPattij & Vanderschuren, 2008; ခ Reynolds က, Penfold, & Patak, 2008) ။ ဒါက Impulse များထဲမှအမျိုးအစားပြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုနောက်တဖန်မသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်အခြားပြဖွယ်ရှိများမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, အခြားနှစ်ဦး၏လွတ်လပ်သောကြောင်း Impulse ၏တတိယအမျိုးအစား (ရှိWhiteside & Lynam, 2001) ။ အဖြစ်လူသိများဝတ္ထုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံများချဉ်းကပ်ဖို့စိတ်သဘောထား, အာရုံခံစားစေသောသတင်း (Zuckerman, 1994) သို့မဟုတ် သစ်ခြင်း (Cloninger, Sigvardsson, & Bohman, 1988) ရှာ, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများရှာဖွေရေးနှင့်သူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်အန္တရာယ်များကြားမှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့စိတ်သဘောထားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (အပြုအမူ externalizing ၏ရန်လိုနှင့်အခြားပုံစံများ၏အစောပိုင်းပုံစံများကိုပြတဲ့သူကလေးတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်တွေ့ရှိထားသည်မိုးရွာရွာ et al ။ , 1998).
387 မှ 10 လူငယ်အသက်အရွယ် 12 တစ်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတူ Philadelphia တွင်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ငါနှင့်အများအပြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရှာကြံစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့အာရုံခံစားမှုမရှိဘဲသရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် Impulse ပြဿနာများ၏အစောပိုင်းပုံစံများနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ (တစ်အစွမ်းထက် Correlate ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရRomer, Betancourt, Giannetta, Brodsky, Farah, & Hurt, 2009) ။ တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ပုံ 3, Impulse ၏နှစ်ခုအစီအမံနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ် (သူတို့အတန်ငယ်ဤလူငယ်နမူနာ, r = .30 အတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်) လုံးဝ (ထိုကဲ့သို့သော ADHD ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အပြုအမူနှင့်ရောဂါလက္ခဏာကဲ့သို့) ပြဿနာအပြုအမူတွေနဲ့အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအကြားစပ်လျဉ်းရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည် (ထိုကဲ့သို့သော နှစ်ခုအကြားမျှသိသာကျန်နေတဲ့စပ်လျဉ်းနှင့်အတူအရက်, ပိုက်ဆံအဘို့အလောင်းကစား, တိုက်ပွဲများနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်) သောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုက (အန္တရာယ်များအပြုအမူများ၏အစောပိုင်းသရုပ်များအတွက် Impulse နှစ်ခုပုံစံများ၏အရေးပါမှုကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် disinhibition ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဘယ်နေရာတွေမှာအပေါ်အရပ်ကိုအလေးပေးသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Tarter et al ။ , 2003; Zucker, 2006).
ကြောင်း Impulse ဖေါ်ပြခြင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်၏ရလာဒ်အနေဖြင့် (Philadelphia တွင် preadolescents (10 မှအသက်အရွယ်မရွေး 12) ၏အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်အန္တရာယ်များနှင့်ပြဿနာအပြုအမူတွေအတွက် covariation ကရှင်းပြသည် Romer, et al ။ , 2009) ။ အန္တရာယ်အပြုအမူတွေမှပြဿနာအပြုအမူတွေကနေ Path ကိုမဟုတ်ခဲ့ ...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ်ယူ Predisposing ကလေးများအတွက်အစောပိုင်းဖိအား၏အခန်းက္ပ
အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇများထံမှလျင်မြန်စွာစုဆောင်းထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျန်းမာရေးအတွက်ပြင်းထန်သောဖိစီးမှုများကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုအလေးအနက်ဖော်ပြသည်။ ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုများ၊ လူတစ် ဦး ချင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရပ်တည်သောသူများသည်ကျန်းမာရေးရလဒ်များ၏ကျယ်ပြန့်သော“ အဆိပ်အတောက်” သက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများစွာရှိသည်။Shonkoff, Boyce, & McEwen, 2009) ။ အဆိုပါ CDC အားဖြင့်ကောက်ယူဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ ပတ်သက်. နှင့်တကွ, ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (ACE အား) လေ့လာမှု (Anda et al ။ , 2006; Middlebrooks & Audage, 2008), ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးမှထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏နောက်ပိုင်းတွင်ဆိုးရွားသောပုံစံများကိုခန့်မှန်းဘယ်လိုပြသထားတယ်။ အထူးသဖြင့်, ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းဖိအား, စိတ်ခံစားမှုလျစ်လျူရှု, မိဘပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအတွက်အကြမ်းဖက်မှုမှထိတွေ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, စွဲလမ်းနှင့်သတ်သေအပါအဝင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုးရွားသောဆယ်ကျော်သက်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးလူငယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ဖိစီးမှု၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်မှထိတွေ့မှုမှအလွန်အမင်းဆက်စပ်ကြီးပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်နှင့်မရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုအေ့စ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌အန္တရာယ်များအပြုအမူ သာ. ပေါ်ပေါက်ရေးခံစားခဲ့ရသညျ။
မျောက်ဝံများနှင့်ကြွက်အပေါ်သုတေသနဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သောအပြုအမူအပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအစောပိုင်းအချို့ကိုနားလည်မှုပေးပါသည်။ ကြွက်များနှင့်အတူ Meaney နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၏သုတေသနအစောပိုင်းမိခင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲအမျိုးအနွယ်အပေါ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ သူတို့ရဲ့မော်ဒယ်မှာ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး (HPA) တွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ကြောင့်မျိုးဗီဇ (စိတ်ဖိစီးမှုပိုမို reactivity ကိုမှဦးဆောင် "အသံတိတ်" နေကြတယ်Meaney, 2001) ။ ကြွက်များတွင်လျော့နည်းမွေးကင်းစကလေးများကသူတို့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနေသောမိခင်များကဤသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုများ hippocampus အတွက် serotonin လုပ်ငန်းဆောင်တာများလျှော့အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ထို့အပြင် hippocampal လုပ်ငန်းဆောင်တာကကမကထပြုခဲ့ Spatial နိုင်စွမ်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပေါ်လာပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်း (အမျိုးအနွယ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများမှအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုထက်လျော့နည်းစေပါတယ်Meaney, 2007).
ဤအဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များ၏ဖြစ်ကောင်းအထူးခွားဆုံးအကျိုးဆက်လျော့နည်းပွားမိခင်အမျိုးသမီးအမျိုးအနွယ်ကိုသူတို့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့အလားတူထုံးစံ၌ပြုမူဖို့ပိုများပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Cross-မြှင့်တင်ရေးဒီဇိုင်းများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဒီမျိုးဆက်ဂီယာကနေရလဒ်များကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင် အတှေ့အကွုံ မဟုတ်ဘဲမျိုးဗီဇထက်။ ဒါကြောင့်အမျိုးအနွယ်မှမိဘများထံမှအကျိုးသက်ရောက်မှုထက်မျိုးရိုးဗီဇဂီယာထုတ်လုပ်ကြောင်းမိခင်အပြုအမူ၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်။
မျောက်ဝံများရှိအစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများသည်လည်းအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မိခင်များကပြုစုပျိုးထောင်ပေးသော rhesus မျောက်များနှင့်အတူ Suomi ၏သုတေသနပြုချက်အရမိခင်များမှပြုစုပျိုးထောင်ပေးသောရွယ်တူချင်းများနည်းတူသက်တူရွယ်တူချင်းတူသောအမျိုးသားများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုအမူကိုပြသကြသည် (Suomi, 1997) ။ စမ်းသပ်တာမျိုးဟာ Macaque မျောက်နှင့်အတူသုတေသနများတွင် Maestripieri နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (အမျိုးအနွယ်အပေါ်မိခင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှု၏ neurobehavioral သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ကြပါပြီMaestripieri, 2008) ။ သူတို့ကအစမိခင်တို့ကိုမတရားသဖွငျ့အပြုအမူထက်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောကြောင်းရှာပါ။ ထို့အပြင်သူတို့အမျိုးအနွယ်အတွက် Impulse တိုးမြှင့်ဖို့ပေါ်လာ serontonergic ဖျန်ဖြေများအတွက်အထူးသဖြင့်အခန်းကဏ္ဍရှာပါ။ အကြောင်း, ဦးနှောက်ကျောရိုးအရည်, တိုးမြှင့ Impulse ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တစ်ခုညွှန်ပြချက် (ထဲမှာ serotonin ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှိပ်စက်အမျိုးအနွယ်ပြပွဲဖြစ်ပါသည်McCormack, Newman က, Higley, Maestripieri, & Sanchez, 2009) ။ ဒီသုတေသနတစ်ခုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ရှုထောင့်ဟာ serotonin Transporter ဗီဇ၏တိုတောင်းသော allele ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုတွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူလူသားတွေအတွက်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီမယ့်တွေ့ရှိချက် (မိခင်အလွဲသုံးစားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ကြောင်းCaspi, Sugden, Moffitt, တေလာ, Craig, Harrington, et al ။ , 2003).
လူသားမြားသညျနှင့်အတူသုတေသနလည်းမိဘများကအစောပိုင်းမတရားသဖွငျ့အကြာတွင်အကငျြ့ပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အသက်အရွယ်2ထံမှ 8 (မြင့်အန္တရာယ်သားသမီးများ၏တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုမှာKotch et al ။ , 2008), ကြိုတင်အသက်အရွယ်2မှမိဘလျစ်လျူရှုအသက်အရွယ် 8 မှာရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လျစ်လျူရှုဒီအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာရန်လိုသည့်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ အခွားသောသုတေသန (အစောပိုင်းအလွဲသုံးစားမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ် HPA ဝင်ရိုးကကမကထပြုခဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမှပုံမှန်မဟုတ်သော reactivity ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်Tarullo & Gunnar, 2006).
လူသားတွေအတွက် reactivity ကိုဝင်ရိုးတိုးမြှင့် HPA များအတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုရှင်းပြချက်စမ်းသပ်အတွက်တစ်ခုမှာအခက်အခဲဦးနှောက်တစ်သျှူးဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောလေ့လာမှု၌, McGowan နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (2009) သတ်သေသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်သေသောသူကွယ်လွန်သူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် hippocampal တစ်ရှူးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သတ်သေဖြင့်သေသောသူတို့အသူတို့တွေကလေးများသို့မဟုတ်မအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကြုံတွေ့ဖူးခြင်းရှိမရှိအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုရှင်းပြချက်အရ, ကလေးတို့ကိုမတရားသဖွငျ့ခံစားခဲ့ရသူကိုဦး hippocampus အပါအဝင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဒေသများအတွက်မျိုးဗီဇတိတ်ဆိတ်ပိုမိုသက်သေအထောက်အထားပြသသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအမှန်ပင်အရှင်သောလူသားမြားအလားတူဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသက်ရောက်မှု၏ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေး, ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
Meaney ၏သုတေသနပြုချက်အရကလေးများအပေါ်မိခင်၏အပြုအမူသည်မိခင်ကြုံတွေ့ရသောစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသောမိခင်များသည်မွေးကင်းစကလေးများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနည်းပါးသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခုခံကာကွယ်သည့်တုံ့ပြန်မှုဟုယူဆကြသည်။ ၎င်းသည်သားစဉ်မြေးဆက်အားပိုမိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမှုဖြင့်အချို့သောအားသာချက်များကိုပေးအပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့်ထောင်ချခြင်းတို့အတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်စေသောအခြားပြင်ပအခြေအနေများကြောင့်လူသားများတွင်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ မိခင်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများမှာအစားအစာနှင့်အခြားအထောက်အပံ့များနဲ့ပတ်သတ်တဲ့မသေချာမရေရာမှုများအထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေနိုင်သောအခြေအနေများမှာပိုမိုများပါတယ်။အီဗန် & ကင်မ်, 2007).
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Impulse အတွက်အပြောင်းအလဲများ
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်အပြုအမူဘယ်နေရာတွေမှာ၏လေ့လာရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးဆက်ရှိနေသေးသည့်အစောပိုင်းစတင်ခြင်းလမ်းကြောင်းအပြင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းလူကြီးစဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးကြောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဘယ်နေရာတွေမှာလဲမကြာခဏရှိပါတယ်ဖော်ပြသည်။ သူတို့လူငယ်လူကြီးဝင်အဖြစ်ကျဆင်းလေ့ရှိသောကြောင့် Moffitt ဆယ်ကျော်သက်-ကန့်သတ်ထားဘယ်နေရာတွေမှာအဖြစ်ဤအတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဤအဘယ်နေရာတွေမှာ၏အကြီးဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းလူငယ်တစ်အများစုရဲ့အနှစ်သာရကမှပေါ်လာသောအာရုံရှာထဲမှာမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံစားမှုရှာအတွင်းမြင့်တက်လာသည့် ventral striatum (ရန် dopamine များလွှတ်ပေးရေးအတွက်တိုးဆက်စပ်နေသည်ကုန်သည်များ et al ။ , 2003). လှံကို (2007) မိသားစုစွန့်ခွာရန်နှင့်အသစ်သောနယ်မြေနှင့်ရွေးချယ်ထားသောအိမ်ထောင်ဖက်စူးစမ်းဖို့ရွယ်တူချင်းအတူထွက်စွဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုတိရိစ္ဆာန်အားပေးဖို့ပေါ်လာသောနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်တစ်ဦးဇီဝဗေဒတစ်လောကလုံးအတိုင်းဤဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ (14 မှလူငယ်အသက်အရွယ် 22 ၏အမျိုးသားရေးနမူနာအတွက်ရှာကြံအာရုံ၌ဤမြင့်တက်လေ့လာတွေ့ရှိပါပြီRomer & Hennessy, 2007) (ကြည့်ရှု ပုံ 4) ။ အာရုံခံစားမှုရှာ၏ခြုံငုံအဆင့်အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းသဘောကိုဤအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြာရှည်ကာလပြ။ အသက်အရွယ် 16 န်းကျင်အမျိုးသမီးလူငယ်အထွတ်အထိပ်သွားရမည်အကြောင်း, အထီးလူငယ်အသက်အရွယ် 19 အကြောင်းကိုသည်အထိသူတို့၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိကြပါဘူး။ အာရုံခံစားမှုရှာ၌ဤမြင့်တက်နျူကလီးယပ် accumbens ၏ dopaminergic activation များထဲမှပေါ်ထွန်းခြင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအများဆုံးကြွေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံခံစားမှုရှာ၌ဤမြင့်တက်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်ဖမ်းဆီးမှုများအဖြစ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတခြားအသက်အရွယ် gradients အတူသိသိသာသာအရတော့ဖြစ်ပါတယ် (ကြည့်ရှု ပုံ 5) ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအနာဂတ်လေ့လာမှု (အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်Johnston, O'Malley, Bachman, & Schulenberg, 2006) ။ ထို့အပွငျသဘောကိုဤအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူသဘောထားတွေကိုတစ်အိမ်ရှင်ချိတ်ဆက်ပြီRoberti, 2004; Zuckerman, 1994).
လူငယ်အမျိုးသား Annenberg စစ်တမ်းများတွင်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ရှာကြံအာရုံခံစားမှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း (ထံမှယူ Romer & Hennessy, 2007,) ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်။
ယင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအနာဂတ်ကိုလေ့လာအစီရင်ခံအဖြစ် longitudinal အရက်သေစာအသုံးပြုမှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ဆေးခြောက်နှင့်စီးကရက်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရှာကြံအာရုံထဲမှာမြင့်တက်ဖို့ဆက်စပ်တစ်ခုမှာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းက Impulse မန်နီးဖက်စ်သည်၏အခြားပုံစံများအဖြစ်အပြုအမူကျော်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထား (ဤမေးခွန်းကိုအပေါ်ကျဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အာရုံရှာခြင်းနှင့်အိုင်ကျူအကြားအသေးပေမယ့်သိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်ပေးထားZuckerman, 1994), ကအားကောင်းအာရုံရှာကြံ drives တွေကိုပြတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များမနည်း၎င်းတို့၏အပြုအမူကျော်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုတျနိုငျဖြစ်ကြောင်းထင်ရပေသည်။ အမှန်မှာထို Philadelphia တွင်လမ်းကြောင်းလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ (အာရုံရှာအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုအပြုသဘောအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတာဖြစ်ကြောင်းRomer, Betancourt, Brodsky, Giannetta, Yang, & Hurt, 2009) ။ ထို့ကြောင့်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏ပိုပြီးအစွမ်းထက်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါကြောင်းပုံရသည်။
မိုးရွာရွာနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (နေဖြင့်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုRaine, Moffitt, Caspi, Loeber, Stouthamer-Loeber, & Lynam, 2005) တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ Anti-လူမှုရေးလူငယ်၏နမူနာအဖြစ်ပိုပြီးဆယ်ကျော်သက်-ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် Non-offending လူငယ်အတွက် neurocognitive function ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင်လစ်လပ် hyppocampal function ကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်း Anti-လူမှုရေးလူငယ်အတွက် Spatial နှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်မျှသာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Anti-လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်သေးငယ်တဲ့မြင့်တက်ပြတဲ့သူလူငယ်သိမြင် function ကိုအများစုအစီအမံအပေါ် Non-ဖောက်ပြန်တဲ့သူငယ်သောအရွယ် မှစ. အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခဲ့ကြသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ်ယူအတွက်ရှာ Sensation ၏အခန်းက္ပ
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက်ရှာကြံအာရုံ၏အစွမ်းထက်အခန်းကဏ္ဍပေးထားသောကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုလူကြီးများကအသုံးပြုလျက်ရှိသောသူတို့ကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတဲ့မကြာသေးမီကအဆိုပြုထားမော်ဒယ်မှာတော့ Romer နှင့် Hennessy (2007) အာရုံခံစားမှုရှာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမူအကျင့်အခြားနည်းလမ်းအကဲဖြတ်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်၏အမည်ရအသုံးပြုမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုံးဖြတ်ချက်ချ, အခြေခံကြောင်းတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, Slovic နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (နေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်Finucan, Alhakami, Slovic, & Johnson, 2000; Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 2002), အကြိုးသကျရော heuristic ယင်း၏ဆုလာဘ်အလားအလာအကဲဖြတ်များအတွက်သတ်မှတ်ထားအဖြစ်တုန့်ပြန် option ကိုရန်ကြီးစိုးထိခိုက်စေတုံ့ပြန်မှုပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့နဲ့ရိုးရိုးဆုံးဖြတ်ချက်စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် heuristic အသုံးပြုမှုအန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ်၏သဘောထားအမြင်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်စပ်လျဉ်းမိတ်ဆက်။ ပိုမိုအဆင်သင့်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေကာ option ကိုတွဲကြောင်း, နည်းလေစွန့်စားမှုကသူနဲ့ဆက်စပ်နေသည်ဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်စားမှုနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားအဆိုပါပြောင်းပြန်စပ်လျဉ်းအန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်လွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဆင်ခြင်တုံတရားရွေးချယ်မှုမော်ဒယ်များကနေသွေဖည်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်ယေဘုယျအားဖြင့် (မသေချာမရေရာအကျိုးဆက်များကမ္ဘာပေါ်မှာဆက်နွယ်နေကြောင်းကြသည်မဟုတ်Slovic et al ။ , 2002) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှုထောင့်အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်စပ်လျဉ်းစည်းကြပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဝိသေသဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဲကုလအမူအကျင့်ရွေးချယ်စရာမှလွှမ်းမိုးအကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှုကထိန်းချုပ်ထားတရားသဖြင့်စီရင်အချို့ဘက်လိုက်မှုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာရပ်စေသည်။ ကျွန်တော်ပျော်မွေ့သူများသည်လှုပ်ရှားမှုများအမှန်တကယ်ဘေးကင်းပေမယ့်ဒီထက်အကျိုးသက်ရောက်စေသာယာသောဖြစ်ကြောင်းများထက်လျော့နည်းအန္တရာယ်များအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကားများမောင်းထက်သော်လည်းရထားယူကြိုက်တတ်တဲ့အပေါင်းတို့, တခြားမပြတ်, ရထားကားများထက်ဝေးဘေးကင်းဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထို heuristic ဆုံးဖြတ်ချက်အန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးဂရုစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းထက်ရိုးရှင်းတဲ့အောင်ပြန်ဆို။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ၏ရှုထောင့်ကနေ, အကြိုးသကျရော heuristic ၏အသုံးပြုမှုကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနည်းနည်းပဲစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်သောကြောင့်, ကကျယ်ပြန့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲအပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးယန္တရား၏ကျယ်ပြန့်ရငျ့အပေါ်မူတည်သင့်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့နည်းနည်းအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အကဲဖြတ်ကိုထိခိုက်အခြေခံသော ventral PFC ဒေသများ (dorsal နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒေသများထက်အစောပိုင်းရင့်ကျက်Fuster, 2002) အများအပြားအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်း (Miller က & Cohen ကို, 2001) ။ ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အမူအကျင့်ကိုယူပြီးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကျနော်တို့ heuristic အသက်ရှင်လျက်နှင့်ကောင်းစွာဘုံအောင်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာတည်သည်ကိုထိခိုက်ကြောင်းရှာပါ။ ထို့အပြင်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို (အစောပိုင်းလူကြီး (အသက် 14) အားနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက် 22) မှအသက်အရွယ်နှင့်အတူကွဲပြားဖို့မထင်ထားဘူးRomer & Hennessy, 2007) ။ ဥပမာ, အရက်မသောက်, ဆေးလိပ်မသောက်ရန်ပူးတွဲခြင်း, ဆေးလိပ်သောက်ဆေးခြောက်ကိုထိခိုက်, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်စွန့်စားမှု၏တရားစီရင်ပိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောင်းပြန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါး၏သုံးစွဲဖို့ related ကြောင်းတဦးတည်းအချက်ဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ကြောင်းအကဲဖြတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်အန္တရာယ်စီရငျခကျြတစျခုစီမူးယစ်ဆေးမှပူးတွဲပါအကျိုးသက်ရောက်စေအပြုသဘောထက်ကျော်လွန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမရှိသိသာခန့်မှန်းထည့်ပါ။
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနောက်ထပ်အရေးကြီးသောလက္ခဏာရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ပုံ 6, အာရုံခံစားမှုရှာဖွေသူများသာသာကိုင်သာရှိတဲ့ဝတ္ထုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံများမှထိခိုက်စေ attach, သူတို့ကလည်းတူညီတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိသည်သောရွယ်တူချင်းအထဲကရှာကြာလော့။ ဤသည်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအားပေးပေမယ့်လည်းအဆင်သင့်ကြောင်းဝတ္ထုအတွေ့အကြုံများမှပူးတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်စေပိုကောင်းစေပါတယ်သာတဲ့လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရှာကြံအာရုံခံစားမှုအတွက်ကွဲပြားသောသူလူငယ်အလားတူရွယ်တူချင်းအတူစုရုံးသောကြောင့်, အဆင့်ဆင့်ရှာကြံမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အာရုံ၏သက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်လွှဲပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အခြားသူများအားထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်အားဖြည့်နေကြသည်။ အလားတူအသက်လူငယ်တစ်ပြိုင်နက်အာရုံရှာ၌တူညီသောမြင့်တက်တွေ့ကြုံခံစားကြောင်းပေးထား, ဒီသက်တူရွယ်တူအကျိုးသက်ရောက်မှုဝတ္ထုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမူအကျင့်ဖို့ကိုထိခိုက်ဆွဲဆောင်မှုခြီးမှမျး။ ရလဒ်အဖြစ်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေ၏သက်ရောက်မှုသက်တူရွယ်တူလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်။
အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေအဆင်ပြေအောင် 14 မှလူငယ်အသက်အရွယ် 22 အတွက်ရှာကြံနှင့်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအာရုံခံစားမှုအကြားစပ်လျဉ်း (ဖျန်ဖြေကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုဖေါ်ပြခြင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်များ၏ရလဒ်များ Romer & Hennessy, 2007).
တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ပုံ 6အဆိုပါမော်ဒယ်အတွက်အချက်များချိတ်ဆက်အလေးနှစ်ဦးစလုံးအာရုံရှာကြံနှင့်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အကြံပြုလမ်းကြောင်းအပေါ်အကဲဖြတ်ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်တစ်ဦးတည်းသက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်ထက်ဒီလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အပြုအမူအတွက်ပိုပြီးပြောင်းလဲမှုထုတ်လုပ်ရန်ဆုံ။ စုစုပေါင်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်အသုံးပြုခြင်းကိုဆေးရွက်ကြီးအတွက်အပြောင်းအလဲ, အရက်နှင့်ဆေးခြောက်၏ထက်ဝက်ကျော်ဘို့အကောင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်သက်ရောက်မှုကန့်သတ်မရ၌ဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ မြီးကောင်ပေါက်ကားများအတွက်သွားလာသည့်အခါထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုအသုံးပြုရန်ပျက်ကွက်၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Dunlop နဲ့ Romer (2009) ဒီအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ထက်ဝက်ခန့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိစ္စတွင်သို့သော်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးတည်းကိုထိခိုက်ထက်အတန်ငယ်အားကောင်းခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအပေါ်ရှာကြံအာရုံ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်က Impulse ၏ဤပုံစံအတွက်တိုးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်မြင့်တက်လာမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ရှင်းပြဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပွငျအာရုံရှာကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်သောဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များလူကြီးများကအသုံးပြုလျက်ရှိသောသူတို့ကိုကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။ အမှန်မှာထို heuristic နည်းနည်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောမဟုတ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အစအားဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အာရုံရှာ Impulse ၏အခြားပုံစံများနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လိုငွေပြမှုကိုထင်ဟပ်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အာရုံရှာနဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ PFC ဦးနှောက်ရငျ့အတွက်လိုငွေပြမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့နည်းနည်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ်ယူခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. အထောက်အထားရှိပါသလော
ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြအထောက်အထားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့် Impulse အနည်းဆုံးသုံးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုမြီးကောင်ပေါက်ထိုသို့သောအပြုအမူအခြေခံကြောင်းကိုအကြံပြုထားသည်။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်တုန့်ပြန်တားစီးတာဝန်များကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ထို့အပြင် Impulse အနည်းဆုံးနှစ်ခုပုံစံများကိုအားနည်းနေအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ သို့သျောလညျးအာရုံရှာပြောင်းပြန်သည်ဤအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏တစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပေါ်လာမတကယ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုအလုပ်လုပ်မှအတန်ငယ်အပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကအလုပ်လုပ် memory နဲ့တုန့်ပြန်တားစီးတာဝန်များကိုအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအမှု (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်Bunge & Crone, 2009; လှံ, 2009; Williams, Ponesse, Shachar, Logan, & Tannock, 1999) ။ ဤအရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲအရပျကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေကျော်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်ကန့်သတ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံမြားတှငျပွောငျးလဲထင်ဟပ်နိုင်မလား?
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝရငျ့အကြားတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်းကိုထောကျပံ့ရန်မကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အထားလုနီးပါးရှိပါသည်။ ဤသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနိုင်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများစောငျ့ရှောကျဖို့ခက်ခဲကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ တို့ကမှတ်ချက်ပြုထားသကဲ့သို့ သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006:
Neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု (ဥပမာ Synaptic တံစဉ်များကို, myelination) ၏ယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရလို့မရပါဘူး။ သို့သော်ဤအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုသနျ့နှင့်ရငျ့နေစဉ်ယင်းဦးနှောက်ဒေသများ (PFC နှင့် striatum) မှအပြန်အလှန်စီမံကိန်းများချော-tuning ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤအနက်ကိုသာမှန်းဆသည်။ (6885)
lu နှင့် Sowell (2009) သိမြင်မှုနှင့်မော်တာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများအကြားစပ်လျဉ်းအကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ သူတို့ရဲ့အကျဉ်းချုပ်တိုးတက်လာသောသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှ Synaptic တံစဉ်များကိုဆောင်၏ရောင်ပြန် thinning cortical သောအယူအဆအဘို့အများကြီးအထောက်အထားမပေးပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အိုင်ကျူစဉ်ဆက်မပြတ်ကိုင်ပြီး, Sowell နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2004) အသက်အရွယ်5ထံမှ 11 မှ cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ဝေါဟာရများတွင် သာ. ကြီးမြတ်တိုးတက်မှု, ဦးနှောက်ရငျ့သင်ယူခြင်းထက်ကမောင်းနှင်ခံရဖို့ပုံရသည်မယ်လို့တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့အိုင်ကျူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်၏ function ကိုအဖြစ်အသက်အရွယ်7ထံမှ 19 မှ cortical ထူပြောင်းလဲမှုများဆန်းစစ်, Shaw နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2006) သာလွန်အိုင်ကျူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပါးလွှာဖြစ်စဉ်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ နောက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်အိုင်ကျူနှင့်အတူများထက်။ cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လျှင်, တဦးတည်းကပိုမိုမြင့်မားအိုင်ကျူနှင့်အတူသူတို့အဘို့အစောပိုင်းကဖြစ်ပေါ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေသများတွင် cortical ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကို (အနီးအနား Sylvan left hemisphere), နှင့်ဆက်စပ်သော thickened စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ် (တိုးချဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ထက်လူး, Leonard, & Thompson က, 2007) ။ ထို့ကွောငျ့အ cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ပင် cortex အပေါငျးတို့သဒေသများအနှံ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလက္ခဏာမထားဘူး။
အဖြူရောင်အမှု၌အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, Berns, Moore, & Capra (၂၀၀၉) အဆိုပါ PFC အတွက် myelination နှင့်အန္တရာယ် 12 မှလူငယ်အသက်အရွယ် 18 အတွက်တာများအကြားစပ်လျဉ်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အသက်ကျင်းပခြင်း, သူတို့ကအန္တရာယ်သဘောထားတွေကိုယူပြီးတွေ့ရှိရခဲ့ကြသည် အပြုသဘော အဖြူကိစ္စဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, DeBellis နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008) အဆိုပါ Corpus callosum ၏ myelination ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမရှိဘဲထိန်းချုပ်မှုလူငယ်အတွက်ထက်အရက်မမှန်နှင့်အတူလူငယ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လူငယ်အတွက်ပြဿနာအပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ် PFC myelination အတွက်နှောင့်နှေး၏ထောက်ခံမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားပျက်ကွက်ဒါပေမယ့်လည်းမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ဆန့်ကျင်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသုတေသနစုစည်းတင်ပြရန်အတွက်, lu နှင့် Sowell (2009) : သည်ဟုမှတ်ချက်ပြု
morphological နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရငျ့အကြားဆက်စပ်မှု, မှတ်သားစရာများပေမယ့်, သာအသင်းအဖွဲ့များထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် elucidate လို့မရပါဘူး။ neuroscience နေဆဲ morphological ရငျ့ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ဝယ်ယူဖွသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုဝယ်ယူ morphological ပြောင်းလဲမှုမောင်းလျှင်ရှိမရှိလေ့လာသင်ယူရန်ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြု. တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပေါ်အားကိုးရမည်ဖြစ်သည်။ (19)
တချို့ကသုတေသီများဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကိုကူညီနိုင်မယ်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေချိန်တွင်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေတာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးမြားတှငျပါဝငျခွငျးစဉ်လူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေအသက်အတွက်ကွဲပြားတစ်ဦးချင်းစီ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် PFC ၏ differential ကို activation နှင့် ပတ်သက်. ရလဒ် PFC activation အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပြောပြတယ်မည်သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုလြှော့ကြပြီမဟုတ်။
တိုးချဲ့အန္တရာယ် attribute ကြောင်းသီအိုရီရှာကြံအာရုံခံစားမှုမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းယူပြီးနှင့်ကိုက်ညီ (ကုန်သည်များ et al ။ , 2003), သွပ်ရည်စိမ် et al ။ (2006) တွေ့မြီးကောင်ပေါက် (13 မှအသက်အရွယ်မရွေး 17) အငယ် (7 မှအသက်အရွယ်မရွေး 11) သို့မဟုတ်အဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီ (အသက်အရွယ်မရွေး 23 မှ 29) အကျိုးကိုထားချက်အရသည့်အခါဖြစ်စေထက်နျူကလိယ accumbens ပိုမိုအထွတ်အထိပ်ကို Activation ပြ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်, Orbital တိုကျရိုကျ cortex (OFC) ၏ activation ဖို့ကိစ်စတှငျတူညီသောအတိုင်းအတာအပေါ်လူကြီးများအနေဖြင့် PFC တစ် ventral ဧရိယာကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ကလေးများမြီးကောင်ပေါက်သို့မဟုတ်လူကြီးများဖြစ်စေထက်ပိုမိုအားကောင်းတုံ့ပြန်မှုပြ။ ဤရလဒ်သည်အလွယ်တကူအသက်အရွယ်တစ် function ကို (ကွဲပြားခြားနားသော pose အတွက်ချစ်စရာပင်လယ်ဓားပြ၏ရုပ်ပုံ) အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားတန်ဖိုးနှင့်အကျိုးစီးပွားအတွက်ကွာခြားနိုင်မယ့်ဆုလာဘ် cue ၏အသုံးပြုမှုကိုပေးထား, သို့သော်, အနက်ကိုဘော်ပြမှအတန်ငယ်ခက်ခဲခဲ့ကြသည်။
ဦးနှောက်ကို Activation တစ်ဦးပြည့်စုံလေ့လာမှု၌, Eshel, နယ်လ်ဆင်, တိုနီဘလဲ, ထင်း, & Ernst (2007) အန္တရာယ်အတွက်ကွဲပြားကြောင်း options များအကြားရွေးချယ်မှုအောင်နေချိန်မှာနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက် (9 ထံမှ 17 မှအသက်အရွယ်မရွေး) ကိုအကျူးနှင့်အထက်လူကြီးများ (20 မှအသက်အရွယ်မရွေး 40) မှငယ်ရွယ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဝေဖန်နှိုင်းယှဉ်ပိုကြီးတဲ့ရလာဒ်များအတွက်ဆုလာဘ်၏အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့သောသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်အသေးစားငွေကြေးရလဒ်များအဘို့အဆုလာဘ်မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ရွေးချယ်မှုအကြားခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှာသုတေသီများစဉ်ဆက်မပြတ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုအမျိုးအစားများများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးများများကိုမစောင့်ဘဲ။ အဆိုပါအန္တရာယ်များအခြားရွေးချယ်စရာရွေးချယ်ခြင်းနည်းအန္တရာယ်များအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမြဲတမ်းမဲ့ဖြစ်စေသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသူတို့အန္တရာယ်များမဲ့ဖြစ်စေသည် option ကိုရွေးချယ်ထားသည့်အခါ, အဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အသက်ငယ်သူမြားကိုထက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC activated ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သာ. ကြီးမြတ် PFC activation ၏သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအနက်နေမကောင်း-အကြံပြုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချတဲ့အခါမှာအဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီအငယ်သူတွေကိုထက် သာ. ကြီးမြတ် PFC activation ပြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရှင်းနေသည်မှာ, ဤလေ့လာမှုလူကြီးများအတွက်သာလွန်တိုကျရိုကျထိန်းချုပ်မှုအတည်ပြုအနည်းငယ်သာပါဘူး။
အသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ကို Activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု detect လုပ်ဖို့ fMRI သုံးပြီးဤအရာမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အခြားလေ့လာမှုများမှာတော့ Ernst နှင့် Hardin (2009) : သည်ဟုမှတ်ချက်ပြု
ontogenetic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လမ်းကြောင်း delineating ၏ရည်မှန်းချက်သည်ဤသုတေသန၏ရှုပ်ထွေးတိုးပွါးခြင်းနှင့်ယူဆချက်ကျပ်နှင့်တစ်ဦးခြေလှမ်းပညာကိုစနစ်တကျချဉ်းကပ်ဘို့စမ်းသပ် Paradigm ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလမ်းပြသီအိုရီမော်ဒယ်များလိုအပ်သည်။ (69-70)
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းအတွေ့အကြုံကိုထဲမှာမသာကွာခြားကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအတားအဆီးယူဆချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုအထူးသဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေးထား lu နှင့် Sowell (2009)ဒါကြောင့်သင်ယူမှုအပေါ်မူတည်မ morphologic ရငျ့သူတို့ထံမှဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကို disentangle ရန်ခက်ခဲပုံပေါ်လိမ့်မယ်။
တို့ကအကြံပြုနောက်ထပ်ချဉ်းကပ် Bung နှင့် Crone (2009) differential သိမြင်မှုလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှဆယ်ကျော်သက်ဖော်ထုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ရေးဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထုတ်လုပ်နိုင်ပါကပြုလုပ်လေ့ကျင့်ရေးလုံလောက်သောဦးနှောက်ရငျ့၏မရှိခြင်းအတွက်မလုံလောက်ပါလိမ့်မယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ်လို့ရသောရငျ့အယူအဆ, ဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။ အတှေ့အကွုံမြား၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သုတေသနပြုခြောအတွေ့အကြုံကိုနှိုင်းယှဉ် morphological ရငျ့၏အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ် add ပါလိမ့်မယ်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကိုလှန်သောဤကဲ့သို့သောသုတေသနရန်ဖြစ်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ရငျ့အတွက်ကန့်သတ်အပေါ်အခြေခံပြီးအလွန်အားကောင်းတဲ့ဟောကိန်းများ၏အမြင်တွင်သူကအတှေ့အကွုံထိုကဲ့သို့သောန့်အသတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်မလားဆုံးဖြတ်ရန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, Impulse ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအတွက်ကစားသောအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍပေးထား, အတွေ့အကြုံ Impulse မဆိုပုံစံပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုမည်သည့်သက်သေအထောက်အထားရှိပါသလော ဤတွင်အထောက်အထားအတော်လေးရှင်းပါတယ်: Impulse နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေလျော့ချကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှဦးနှောက် function ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုကြားဝင်၏မြောက်မြားစွာဥပမာရှိပါတယ်။ ဤအကြားဝင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအကြာတွင်အောင်မြင်သောပါပြီသောသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကလေးဘဝအတွက်ကယ်နှုတ်သောသူတို့ကိုအကြားခွဲခြားရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ကလေးဘဝကြားဝင်တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ဆက်လက် Impulse ၏အစောပိုင်းပုံစံများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီသင့်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြားဝင်အသက်တာ၏ဒုတိယဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာကြောင်း Impulse ၏အခြားပုံစံများကိုရှာကြံနှင့်အလားအလာအာရုံထဲမှာမြင့်တက်တန်ပြန်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
အောင်မြင်မှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြကြောင်းအစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှစ်ခုပုံစံများရှိပါတယ်။ တဦးတည်းကသူတို့ကလေးတွေကိုညှဉျးဆဲခြင်းနှင့်အားဖြင့်အမျိုးအနွယ်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုဆိုးရွားသောရလဒ်များတားဆီးဘို့အန္တရာယ်မှာနေသောမိဘများနှင့်အတူကွားပါဝငျသညျ။ အခြားမိသားစုများနှင့်ကလေးများဖြစ်စေအတူတကွသို့မဟုတ်ရုံကျောင်းမှာ setting တွင်အမျိုးသားတို့နှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင််ရောက်စွက်ဖက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မိဘများနှင့်အတူအအောင်မြင်ဆုံးအစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုမှာနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့သူနာပြုဆုံးမခြင်းကိုခံရသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒါဝိဒ်သည်အိုးနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (1998)။ ဒီပရိုဂရမ်ကြိုတင်မွေးဖွားဖို့မျှော်မိဘသွားရောက်ခြင်းနှင့်မဟုတ်ရင်သည်သူငယ်အတွက်အကောင်းဆုံး Natal အတွေ့အကြုံကိုထက်လျော့နည်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပါဝင်သည်။ အထက်အကျဉ်းချုံးသုတေသနများကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုကြုံနေရမိဘများလျော့နည်းပွားစောင့်ရှောက်မှု၏ပုံစံအတွက်သူတို့သားသမီးပေါ်ကိုဒီအတွေ့အကြုံကိုသွားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီကုသမှုထို့နောက်ကျောင်းမှနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆင်းရဲသား adapter မှဦးဆောင်, သားသမီးအတွက် Non-အကောင်းဆုံးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် High-အန္တရာယ်မိဘများနှင့်အတူခရီးစဉ်အတွင်းမိဘထောက်ခံမှုဖိအားတွေနဲ့ပိုကောင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်နှင့်ကလေးများစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရှောက်သွားဖို့စိတ်သဘောထားလျှော့ချရန်သူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏အကဲဖြတ်ကလေးများကျောင်းပိုကောင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ရောဂါ၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများအပါအဝင်နည်းပါးလာစိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ, တွေ့ကြုံခံစားဖော်ပြသည်။ သူတို့သားသမီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့အသက်အရွယ်အဖြစ်အပြင်, မိဘ (ကျန်းမာအပြုအမူပြIzzo, Eckenrode, စမစ်, Henderson, ကိုးလ်, Kitzman, et al ။ , 2005) ။ ဒီပရိုဂရမ်ကလေးမြားအတှကျနှင့်ကျောင်းပညာရေး, ထောင်ချခြင်းနှင့်သက်သာချောင်ချိရေးအထောက်အပံ့များအတွက်နောက်ပိုင်းမှာကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချခြင်းအဘို့အဆိုးရွားသောရလဒ်များတားဆီးအတွက်၎င်း၏အောင်မြင်မှုပေးထားဖက်ဒရယ်ထောက်ခံမှုများအတွက်ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဘဝကတည်းကမိဘများနှင့်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အစောပိုင်းလေ့ကျင့်မှုပုံစံအချို့သည်အပြုအမူအပေါ်အထူးသဖြင့်ပညာသင်နှစ်ရလဒ်များနှင့်ပြင်ပမှအပြုအမူအမျိုးမျိုးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများတိုးပွားလာနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထူးကြပ်မတ်ထားသောမူကြိုအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (A. အ Reynolds က & ဘုရားကျောင်း, 2008), အမြင့်မား / Scope ပယ်ရီမူကြိုစီမံကိန်းနှင့်ချီကာဂိုကလေး-မိဘမူကြိုအစီအစဉ်ကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောကြားဝင်, ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်ကျောင်းကလေးတွေကိုစောင့်လျက်, ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာကိုလျှော့ချသည်ဟုအန္တရာယ်ထောင်ချခြင်း behaviors ကဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားအစီအစဉ်များထိုကဲ့သို့သော သာ. ကြီးမြတ်ဇွဲနဲ့ပြောင်းပြန် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်း Self-စည်းမျဉ်းအဖြစ်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု, သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပေါ်လာပါသည်။
စိန်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (ကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာစိန်, ဘား, သောမတ်စ်, & Munro, 2007), သုတေသီများပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့အလွန်အမင်းဆက်စပ်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိခိုက်စေသည်ဟုမူကြိုကျောင်းသားများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော ADHD နဲ့အမူအကျင့်ပြဿနာများအဖြစ်မမှန်, impulse နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဤရွေ့ကားကျွမ်းကျင်မှုထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအတှေးအပေါ်လည်ပတ်ရန်နှင့်အာရုံထဲကနေဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းအဖြစ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အခြေခံကြောင်းအမျိုးမျိုးသော PFC functions များ, နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။
မူလတန်းနှစ်များတွင်ကလေးများနှင့်အတူအခြားသုတေသနပြသနာထိန်းချုပ်မှုနည်းဗျူဟာအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် Impulsivity ကိုလျှော့ချဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည် (Barry, & Welsh, 2007; Riggs, Greenberg, Kusche, & Pentz, 2006) ။ ရေရှည်နောက်ဆက်တွဲဒေတာရှိပါတယ်တစ်ခုမှာအစီအစဉ် (ကောင်းမွန်သောအပြုအမူဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်Petras, Kellam, ဘရောင်း, Muthen, Ialongo, & Poduska, 2008) ။ Kellam နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဆရာ, ဆရာမတစျခုလုံးကိုစာသင်ခန်းမှကောင်းသောအပြုအမူများအတွက်မက်လုံးပေးစီမံခန့်ခွဲဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြရသောဝင်ငွေနည်းပထမနှင့်ဒုတိယတန်းအတန်းထဲတွင်ဤအစီအစဉ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဆုလာဘ်များ, နှောင့်အယှက်အပြုအမူကိုလျှော့ချပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း, ကျောင်းစာမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်တစ်တသမတ်တည်းအခြေခံပေါ်မှာအပ်။ , 19 မှအသက်အရွယ်မရွေး 21 မှာ Follow-up, data ကိုကြိုတင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှရန်လိုခြင်းနှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့အပြုအမူများ၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းပြတဲ့သူတွေကိုအပေါ်သိသိသာသာကြာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်ဖော်ပြသ။ အထူးသဖြင့်, Anti-လူမှုရေးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှုန်းထားများအတွက်နောက်ဆက်တွဲမှာအမြင့်မားဆုံးစွန့်စားမှုလူငယ်အတွက်အနိမ့်ကျန်ရစ်၏။
ဒါဟာအစဆေးဝါး ADHD နှင့်အတူသားသမီးများအတွက်ထကြွလွယ်သောရောဂါလက္ခဏာလျှော့ချအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်တွေ့ရှိထားပြီးကြောင်းကိုမေ့လျော့မပေးသင့်ပါဘူး။ Klingberg (2009) စိတ်ကြွဆေး၏အလယ်အလတ်ဆေးများ ADHD ခံစားနေရပြီးကလေးများအတွက်အထူးသဖြင့်ယေဘုယျနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အားဖြင့်မိမိတို့၏ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ဤအဆေးဝါးများအသုံးပြုမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်မပင်သက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Wilens, Faraone, Biederman, & Gunawardene, 2003). Klingberg နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2005) ထို့အပြင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ကွန်ပျူတာ-based သင်တန်းပေးခြင်းကို အသုံးပြု. ADHD ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်မ ADHD နှင့်အတူသားသမီးတို့အဘို့တစ် protocol ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ Posner နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccamanno, & Posner, 2005) အဆိုပြုထားခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများနှင့်အတူသားသမီးတို့အဘို့အလားတူမဟာဗျူဟာစုံစမ်းပြီ။
အကျဉ်းချုပ်မှာတော့အစောပိုင်းကြားဝင်အပေါ်သုတေသနပြုအထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရေးမဟုတ်ရင်ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်တားဆီးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် maladaptive ရလဒ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါထကြွလွယ်သောသဘောထားတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် Self-စည်းမျဉ်းကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ရငျ့ဖြစ်စဉ်များအာရုံရှာသို့မဟုတ် Impulses သတင်းပို့တာကတခြားအန္တရာယ်အတွက်မြင့်တက်မှအောင်မြင်သောလိုက်လျောညီထွေတားဆီးမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမဟာဗျူဟာအောင်မြင်မှုရရန်မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အာကာသကန့်သတ်ချက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်များသည်မကောင်းသောအပြုအမူများကိုရှောင်ရှားရန်သင်ယူနိုင်ကြောင်းသိသာထင်ရှားသည့်အထောက်အထားများရှိသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့အားထိုအပြုအမူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးလျှင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှစ၍ လေ့လာသူများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (Future Monitoring Study) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခြင်းကတစ် ဦး ချင်းနှင့်စုစုပေါင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းသူများမှာမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောယူဆချက်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။Bachman, Johnston, & O'Malley, 1998) ။ မီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုအမြဲတမ်းသို့သော်ထိထိရောက်ရောက်ဤအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အစိုးရကကမကထအချို့သောမီဒီယာများကြားဝင်အမှတ်တမဲ့အများအပြားလူငယ်, ရွယ်တူ (မူးယစ်ဆေးဝါးများစိတ်လှုပ်ရှားစရာကိုရှာဖွေသောအမြင်တိုးမြှင့်နိုင်မယ့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုကူးစက်ပါပြီFishbein, Hall-Jamieson, Zimmer, von Haeften, & Nabi, 2002; Hornik, Jacobsohn, Orwin, Piesse, & Kalton, 2008) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားအမြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အလားအလာကိုဖို့အဆင်သင့်ကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ဝတ္ထုအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆိုးရွားသောရလဒ်များတားဆီးနိုင်ရန်ကူညီနိုင်မယ့်မဟာဗျူဟာရဲ့ A ကောင်းဆုံးသာဓကဒီမဟာဗျူဟာကိုမောင်းနှင်ဖို့အတှေ့အကွုံယူမယ့်ရှုပ်ထွေးအပြုအမူသောစိတ်ကူးအပေါ်အခြေခံသည်အမေရိကန်အတွက်များစွာသောပြည်နယ်များကမွေးစားခဲ့ပြီးသောဘွဲ့ရကားမောင်းသူအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် မာစတာ။ တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ပုံ 7, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုယာဉ်မောင်း (1000 မိုင် (ပျမ်းမျှအားဖြင့်ခြောက်လ) အကြောင်းကိုကားမောင်းပြီးနောက်ပျက်ကျအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားMcCartt, Shabanova, & Leaf, 2003) ။ ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကအနိမ့်-အန္တရာယ်အောက်မှာပြည့်စုံနိုင်ပါလျှင်အခြေအနေများကြီးကြပ်အပြုအမူကျော် သာ. ကြီးမြတ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအောင်မြင်ထားပြီးသည်အထိပြုလုပ်အန္တရာယ်ရှိသောရလဒ်များများအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချပေလိမ့်မည်။ ဘွဲ့ရလိုင်စင်များ၏မဟာဗျူဟာတစ်အများအပြားပြည်နယ်များကမွေးစားခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အညမှာမောင်းမရနိုငျနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူကားမောင်းရချိန်အတွင်းအစမ်းကာလလွန်မှီတိုင်အောင်ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာတော့မြီးကောင်ပေါက်အပြည့်အဝလိုင်စင်ပေးထားကြသည်မဟုတ်။ ဤနည်းဗျူဟာ၏ထိရောက်မှုကိုအထောက်အထား (ကပြည်နယ်အတွက်အရပျ၌ကန့်သတ်အရေအတွက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးထုံးစံ၌ဒါပျက်ကျမှုနှုန်းထားများနှင့်လေးနက်သောဒဏ်ရာများကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မကွောငျးဖျောပွသMorrissey, Grabowski, Dee, & Campbell, 2006).
မောင်းနှင်မိုင်တစ် function ကိုအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဒရိုင်ဘာတို့သည်အနှံ့အပြားပြောဆိုကားတစ်စီးပျက်ကျအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း (ပျက်ကျကားမောင်းအတွေ့အကြုံအကြောင်းကို 1000 မိုင်ပြီးနောက်သိသိသာသာကျဆင်းကြောင်းညွှန်ပြရာမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနျပုံနှိပျ McCartt et al ။ , 2003).
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်စောစောအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ်တာကာလအတွင်းရှာကြံအာရုံ၏ဆိုးကျိုးများ (14 မှ 22) ၏လတ်တလောလေ့လာမှုမှာ, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကျွန်မတစ်ဦးနှောင့်နှေးဝတာဝန်နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်အတူအတှေ့အကွုံ (စိတ်မရှည်တစ်လျှော့ချရေးဦးတည်ကြောင်းတွေ့ရသည်Romer et al ။ , 2010) ။ သူတို့အသက်အရွယ်အဖြစ်ကပိုသည်အခြားလူငယ်ထက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူငယ်ရှာကြံ high အာရုံစိတ်မရှည်တစ်ကျဆင်းမှုပြ။ ဤသည်လျော့ချရေးကိုလည်းလျော့နည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကူးသယ်ဆောင်။ အခွားသောလူငယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအထူးလျှော့စျေးပြောင်းလဲမှုများပြခြင်းငှါမလေ့ရှိပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အတှေ့အကွုံအလွန်အကျွံအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေလျော့ကျစေပါတယ်တဲ့အချက် သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မြင့်မားသောအာရုံခံစားမှုရှာဖွေနေသူဖွထံမှရရှိခဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အကငျြ့-disorders လူငယ်နှင့်အတူသုတေသနကိုလည်း (စိတ်မရှည်တခြားသူတွေကိုထက်ထိုကဲ့သို့သောလူငယ်ပိုမိုငြင်းပယ်ကြောင်းအကြံပြုTurner & Piquero, 2002) ။ ဒါကွောငျ့လူငယ်ရှာကြံသူတို့ရဲ့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, High-အာရုံကြားမှမိမိတို့၏အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့လျော့နည်းအန္တရာယ်များရွယ်တူချင်းထက်လျော့နည်းစိတ်မရှည်ဖြစ်လာ။ အနာဂတ် Translational သုတေသနများအတွက်စိန်ခေါ်မှုလည်းသူတို့ရဲ့ရေရှည်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအန္တရာယ်နိုငျသောဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များမှသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေချိန်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်မှပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုငျကွောငျးကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေးကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အားဖြင့်မှတ်ချက်ပြုအဖြစ် လှံကို (2009),
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်အတွေ့အကြုံများသူတို့အားအတွေ့အကြုံများညီတစ်လမ်းထဲမှာဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကဦးနှောက်စိတ်ကြိုက်အစေခံစေနိုင်သည်။ သူတို့အတှေ့အကွုံမြား၏သဘောသဘာဝအပေါ် မူတည်. မိမိတို့၏အချိန်ကိုက်နှင့်ဤအရပ်မှ၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်များ, ဦးနှောက်ကဒီ Custom အခွင့်အလမ်းအဖြစ်တစ်ဦးအားနည်းချက်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ (308) ။
အနာဂတ်သုတေသနအတွေ့အကြုံနှင့်ဦးနှောက်ရငျ့၏အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု disentangle ဖို့ကူညီသင့်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှု (ဥပမာ, အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်) တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဦးနှောက်ရငျ့နှင့် function ကိုဆနျးစစျကြောင်းလေ့လာမှုများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်မှာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်ရန်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာသုတေသနတစ်ပြိုင်နက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများမှထွက်ခွာသွားလျှင်သူတို့ကြုံတွေ့ရအန္တရာယ်များလျှော့ချနေချိန်မှာသူတို့ရှာအံ့သောငှါအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ပေးနိုငျသောလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအကူအညီပေးသင့်တယ်။
Ainslie G. အ Specious ဆုလာဘ်: Impulse နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တစ်ဦးကအမူအကျင့်သီအိုရီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1975;82: 463-496 ။ [PubMed]
Anda RA, Felitti VJ, Bremner JD, Walker က JD, Whitfield ကို C, ပယ်ရီ bd, et al ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ဆက်စပ်ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများများ၏တည်မြဲသက်ရောက်မှု: neurobiology နှင့်ရောဂါကနေသက်သေအထောက်အထားတစ်ခု convergence ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပမော်ကွန်း။ 2006;256: 174-186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Arnett JJ ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မဆင်မခြင်အပြုအမူ: တစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1992;12: 339-373 ။
Bachman J ကို, G, Johnston LD, O'Malley pm တွင်။ ကျောင်းသားများ၏ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုတွင်မကြာသေးမီကတိုးများလာခြင်းကိုရှင်းပြခြင်း - ရူပဗေဒနှင့်လက်ခံနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ၁၉၇၆ မှ ၁၉၉၆ အထိသက်ရောက်မှုများ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1998;88(6): 887-892 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barkley RA ။ အမူအကျင့်တားစီး, စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို: ADHD တစ်စညျးလုံးသီအိုရီတည်ဆောက်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1997;121(1): 65-94 ။ [PubMed]
Bern GS, Moore က S နဲ့, Capra CM ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုကျရိုကျ cortex ၏တိုးမြှင့်အဖြူကိစ္စင့်ကျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်, တစျခု။ 2009;4(8): 1-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Biglan တစ်ဦးက, Cody C. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မျိုးစုံပြဿနာအပြုအမူတွေကိုကာကွယ်ခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Romer: D, အယ်ဒီတာ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်လျှော့ချ: တစ်ခုပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်ခါနီး။ sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း; တထောင်သပိတ်, CA: 2003 ။ စစ။ 125-131 ။
Bung လုပ် SA, Crone EA ၏။ အာရုံကြောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ခုနှစ်တွင်: Rumsey JM, Ernst M က, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလက်တွေ့မှ neuroscience အတွက် Neuroimaging ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2009 ။ စစ။ 22-37 ။
ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Neuropsychology ။ 2008;28(11): 62-77 ။
Caspi တစ်ဦးကဟင်နရီ B, McGee ro, Moffitt TE, ဆေးလ်ဗား PA ဆိုပြီး။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူပြဿနာများ၏ဒေါသဇစ်မြစ်: အသက်အရွယ်သုံး မှစ. အသက်တဆယ်ဖို့။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1995;66(1): 55-68 ။ [PubMed]
Caspi တစ်ဦးက, Moffitt TE, Newman က DL, ဆေးလ်ဗား PA ဆိုပြီး။ အသက်အရွယ်3နှစ်ပေါင်းမှာမူအကျင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါမမှန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1996;53: 1033-1039 ။ [PubMed]
Caspi တစ်ဦး, အသက်သုံးမှာဆေးလ်ဗား P. ကဒေါသအရည်အသွေးတွေငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကြိုတင်ခန့်မှန်း: တစ်မွေးဖွားဆောင်များတွင်ထံမှ longitudinal သက်သေအထောက်အထား။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1995;66: 486-498 ။ [PubMed]
Caspi တစ်ဦးက, Sugden K ကို Moffitt TE, တေလာတစ်ဦးက, Craig iw, Harrington H ကို, et al ။ စိတ်ကျရောဂါအပေါ်ဘဝမှာစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အ 5-HTT ဗီဇတစ်ခု polymorphic ကအတန်အ။ သိပ္ပံ။ 2003;301: 386-389 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်တစ်ခုအရေးပါကာလ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003;160: 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပုံတူပွားခြင်း CR, Sigvardsson S က, Bohman အမ်ကလေးဘဝကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အရက်အလွဲသုံးစားမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1988;121(4): 494-505 ။ [PubMed]
DeBellis MD, ဗန် Vorhees အီး, et al Hooper SR, Gibler N ကို, နယ်လ်ဆင် L ကို, Hege စင်ကာပူဒေါ်လာ။ ဆယ်ကျော်သက်စတင်ခြင်းအရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် Corpus callosum ၏ပျံ့နှံ့ tensor အစီအမံ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2008;32(3): 395-404 ။ [PubMed]
စိန်တစ်ဦး, ဘား WS, သောမတ်စ်ဂျေ, Munro အက်စ်မူကြိုအစီအစဉ်ကိုသိမြင်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ သိပ္ပံ။ 2007;318: 1387-1388 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dunlop က S, Romer ဃ Non-အသုံးပြုမှုနဲ့ခါးပတ်လူငယ်တစ်ဦး Integrated မော်ဒယ်: အာရုံရှာ, အကျိုးသက်ရောက်စေအကဲဖြတ်များနှင့်မီဒီယာအသုံးပြုမှုများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Annenberg ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒစင်တာ, Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Philadelphia တွင်, PA: 2009 ။
Ernst M က, Hardin MG ။ ပန်းတိုင်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ontogeny ။ ခုနှစ်တွင်: Rumsey JM, Ernst M က, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလက်တွေ့မှ neuroscience အတွက် Neuroimaging ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2009 ။ စစ။ 53-72 ။
Eshel N ကို, နယ်လ်ဆင် EE, တိုနီဘလဲ RJ, ထင်းရူး DS, လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရေး၏ Ernst အမ်နှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာ: အ ventrolateral prefrontal ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် anterior cingulate cortical ။ Neuropsychologia ။ 2007;45: 1270-1279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အီဗန် GW ကင်မ် P. ကလေးဘဝဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ကျန်းမာရေး: တိုးပွားလာသောစွန့်စားမှုထိတွေ့မှုနှင့်ဖိစီး dysregulation ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2007;18(11): 953-957 ။ [PubMed]
Eysenck SBG, Eysenck HJ ။ လူကြီးများအတွက် Impulse, venturesomeness နှင့်စာနာဘို့အသက်အရွယ်စံချိန်စံညွှန်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 1985;6: 613-619 ။
Finucan ML, Alhakami AS, Slovic P ကို, ဂျွန်ဆင်သည် SM ။ အဆိုပါအန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များတရားစီရင်ပိုင်အတွက် heuristic အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အပြုအမူဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဂျာနယ်။ 2000;13: 109-17 ။
Fishbein M က, ခန်းမ-Jamieson K ကို Zimmer အီးဗွန် Haeften ငါ Nabi R. အဆိုပါထိကပြန်ရှောင်: တစ်အမျိုးသားရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမတိုင်မီ antidrug အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကြေညာချက်များ၏ဆွေမျိုးထိရောက်မှုစမ်းသပ်စဉ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2002;92(22): 238-245 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fuster JM ။ တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neurocytology ၏ဂျာနယ်။ 2002;31: 373-385 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2006;26(25): 6885-6892 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ်ဦးက longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999;2(10): 861-863 ။ [PubMed]
ဟေးလ်ကီလိုဂရမ်, White, HR, Chung ငါ Hawkins က JD, Catalano RF ။ Person- နှင့်မူးရူးသောက်စားဘယ်နေရာတွေမှာ၏ variable ကိုဗဟိုပြုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း: ဆယ်ကျော်သက်မူးရူးသောက်စား၏အစောပိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူရလဒ်များ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000;24(6): 892-901 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hornik R ကို, Jacobsohn L ကို, Orwin R ကို, Piesse တစ်ဦးကလူငယ်များအပေါ်အမျိုးသားရေးလူငယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးမီဒီယာကင်ပိန်း Kalton G. အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2008;98(1238): 2229-2236 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Izzo CV ကို, Eckenrode JJ, Smith ကဥပမာ Henderson CR, ကိုးလ် RE, Kitzman HJ ။ အသစ်သောမိဘများအတွက်သူနာပြုအိမ်မှာစစ်ကြော program တစ်ခုမှတဆင့်မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2005;6(4): 269-274 ။ [PubMed]
Johnston LD၊ O'Malley PM, Bachman J, Schulenberg JE ။ အနာဂတ်မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, 1975-2005, vol အပေါ်အမျိုးသားစစ်တမ်းရလဒ်များကို။ II ကို, ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်အရွယ်ရောက် 19-45 ။ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes; Bethesda, MD: 2006 ။
Klingberg တီ လွှမ်းမိုးသောဦးနှောက်: ပြန်ကြားရေး Overload နှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ကန့်သတ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2009 ။
Klingberg T က, Fernell အီး, Olesen PJ, ဂျွန်ဆင်က M, Gustafsson P ကို, Dahlstrom K သည်, et al ။ ADHD နှင့်အတူကလေးများအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ကွန်ပျူတာလေ့ကျင့်ရေး: ကျပန်း, ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2005;44(2): 177-186 ။ [PubMed]
Kotch JB, Lewis က T က, Hussey JM, အင်္ဂလိပ်: D, Thompson က R ကို, Litrownik AJ, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကျူးကျော်များအတွက်အစောပိုင်းလျစ်လျူရှု၏အရေးပါမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2008;121(4): 725-731 ။ [PubMed]
Kreuger RF, Hicks BM, ပက်ထရစ် CJ, Carlson SR, Iacono WG ကို, ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို, antisocial အပြုအမူများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတို့တှငျအ McGue အမ် Etiologic ဆက်သွယ်မှု: အပြင်ပ spectrum ကိုမော်ဒယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2002;111(3): 411-424 ။ [PubMed]
lu LH, Leonard CM, Thompson ကဝန်ကြီးချုပ်။ ယုတ်ညံ့မီးခိုးရောင်အမှု၌သာမန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို phonological အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်: တစ်ဦးက longitudinal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2007;17: 1092-1099 ။ [PubMed]
lu LH, Sowell ER ။ ဦးနှောက်၏ Morphological ဖှံ့ဖွိုးတိုး: အဘယျသို့ပုံရိပ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့သလဲ ခုနှစ်တွင်: Rumsey JM, Ernst M က, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလက်တွေ့မှ neuroscience အတွက် Neuroimaging ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2009 ။ စစ။ 5-21 ။
မိခင်အပြုအမူများနှင့်စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်မွေးကင်းစကလေးအလွဲသုံးစားမှု၏မျိုးဆက်ဂီယာအခြေခံ Maestripieri ဃ Neuroendocrine ယန္တရားများ။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff: D, Kordon ကို C, Chanson P ကို, နာမည်က Y, အယ်ဒီတာများ။ ဟော်မုန်းနှင့်လူမှုအပြုအမူ။ Springer-Verlag; ဘာလင်: 2008 ။ စစ။ 121-130 ။
Mass LC, Tremblay RE ။ သူငယ်တန်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုစတင်ခြင်းအတွက်ယောက်ျားလေးများ၏အပြုအမူ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1997;54: 62-68 ။ [PubMed]
McCartt ကို AT, Shabanova VI ကို, အရွက် WA ။ အတွေ့အကြုံ, ပျက်ကျခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စတင်ယာဉ်မောင်းများ၏အသွားအလာကိုအညွှန်းစာကားမောင်း။ မတော်တဆသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး။ 2003;35: 311-320 ။ [PubMed]
McCormack K သည်, Newman က TK, Higley JD, Maestripieri: D, Sanchez MM ။ serotonin Transporter မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲ, မွေးကင်းစကလေးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စမ်းသပ်တာမျိုးဟာ Macaque မိခင်နှင့်မွေးကင်းစအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှတုန့်ပြန်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2009;55: 538-547 ။ [PubMed]
McGowan PO, Sasaki A, D'Alessio AC, Dymov S, Labonte B, Szyt M, et al ။ လူ့ ဦး နှောက်ရှိ glucocorticoid receptor ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသည်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2009;128(3): 342-348 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McGue M က, Iacono WG ကို, Kreuger RF ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာအပြုအမူများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ psychopathology ၏အသင်းအဖွဲ့: တစ်ဦးက multivariate အပြုအမူမျိုးဗီဇရှုထောင့်။ အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇ။ 2006;36(4): 591-602 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Meaney MJ ။ စောင့်ရှောက်မှု, မျိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ဂီယာ Maternal ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2001;24: 1161-1192 ။ [PubMed]
Meaney MJ ။ မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်ထောသက်ရောက်မှုမှတဆင့်ခုခံကာကွယ်တုံ့ပြန်မှု programming ကို Maternal ။ ခုနှစ်တွင်: Romer: D, Walker က EF, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက် psychopathology နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်: ပေါင်းစပ်ခြင်းကဦးနှောက်နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသိပ္ပံ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2007 ။ စစ။ 148-172 ။
Middlebrooks JS, Audage NC ။ အဆိုပါသက်တမ်းတစ်လျှောက်ကျန်းမာရေးအပေါ်ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ, ထိခိုက်အနာတရရရှိမှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသားရေးစင်တာ; အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ: 2008 ။
Miller က ek, Cohen ကို JD ။ prefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2001;24: 167-202 ။ [PubMed]
Mischel W က, Shoda Y ကို, Peak PK ။ ဆန္ဒပြည့်၏မူကြိုနှောင့်နှေးနေဖြင့်ခန့်မှန်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရည်အသွေး၏သဘောသဘာဝ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1988;54(4): 687-696 ။ [PubMed]
Moffitt TE ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်-ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အသက်တာကို-သင်တန်း-persistent antisocial အပြုအမူ: တစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ taxonomy ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1993;100: 674-701 ။ [PubMed]
Morrissey, MA, Grabowski, DC, Dee T က, S, ကမ့်ဘဲလ် C. ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ခရီးသည်များအကြားဘွဲ့ရယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အစီအစဉ်များနှင့်သေဆုံးမှု၏အစွမ်းသတ္တိကို။ မတော်တဆသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး။ 2006;38: 135-141 ။ [PubMed]
Nagin: D, Tremblay RE ။ ယောက်ျားလေးများ '' ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အတိုက်အခံများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်များနှင့်အကြမ်းမဖက်လူငယ်သက်ငယ်ပြစ်မှုမှလမ်းကြောင်းအပေါ် hyperactivity ၏လမ်းကြောင်း။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1999;70(5): 1181-1196 ။ [PubMed]
ပုံမှန်နှင့် atypical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေအနေတွင်ဦးနှောက်ကို-အပြုအမူဆက်ဆံရေး၏လေ့လာမှုမှနယ်လ်ဆင်, CA, Bloom FE, ကင်မရွန် JL, Amar: D, Dahl RE, ထင်းရူးဃသမာဓိ, multidisciplinary ချဉ်းကပ်နည်း။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology ။ 2002;14(3): 499-520 ။ [PubMed]
et al: D, Henderson CRJ, ကိုးလ် R ကို, Eckenrode J ကို, Kitzman H ကို, Luckey: D ။ သူနာပြုအိမ်သို့ကလေး၏ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုကို ၁၅ နှစ်အကြာလိုက်နာခြင်း။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးများ၏ဂျာနယ်။ 1998; (1238): 1244 ။ [PubMed]
ပက်တာထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ရိဒ် J ကို, B, Dishion တီဂျေ။ Antisocial ယောက်ျားလေးများ။ Castalia; ယူဂျင်း, OR: 1992 ။
Pattij T က, Vanderschuren LJMJ ။ ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများ၏ neuropharmacology ။ Pharmacological သိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2008;29(4): 192-199 ။ [PubMed]
Patton JH စတန်းဖို့ဒ်က MS, Barratt ES ။ အဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;51: 768-774 ။ [PubMed]
Petra H ကို, Kellam စင်ကာပူဒေါ်လာ, Brown က HC, Muthen bo, Ialongo NS, Poduska JM ။ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှုအပြုအမူမှဦးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ epidemiological သင်တန်းများ: first- အတွက်တစ်လောကလုံးကြိုတင်ကာကွယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများငယ်ရွယ်လူကြီးများကသက်ရောက်မှုနှင့်ဒုတိယတန်းစာသင်ခန်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2008;95S: S45-S59 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rachlin အိပ်ချ် Self-ထိန်းချုပ်မှုသိပ္ပံပညာ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကင်းဘရစ်, MA: 2000 ။
မိုဃ်းရေ၏, Moffitt TE, Caspi တစ်ဦးက, Loeber R ကို, Stouthamer-Loeber M က, ဘဝ-သင်တန်းမြဲ antisocial လမ်းကြောင်းအပေါ်ယောက်ျားလေးများအတွက် Lyman ဃ Neurocognitive ချို့ယွင်း။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2005;114(11): 38-49 ။ [PubMed]
မိုဃ်းရေ၏, Reynolds ကနေ C, Venables PH သည်, Mednick လုပ် SA, Farrington DF ။ အသက်အရွယ်3နှစ်ပေါင်းမှာမကြောက်တရား, ဆွ-ရှာနှင့်ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကငယ်စဉ်ကလေးဘဝကျူးကျော်စောစောဓာတ်အဖြစ်အသက်အရွယ် 11 နှစ်ပေါင်းမှာ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1998;55: 745-751 ။ [PubMed]
Reynolds ကတစ်ဦး, ဂျေ, ဗိမာနျတျောဂျေအေ။ မူကြိုကနေတတိယတန်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအစောပိုင်းကလေးဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008;4: 109-139 ။ [PubMed]
Reynolds ကခသညျလူသားတို့နှင့်အတူနှောင့်နှေး-ဝသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမှဆက်ဆံရေး။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 2006;17: 651-667 ။ [PubMed]
Reynolds က B, Penfold RB, ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏ Patak အမ်အရွယ်အစား: ဓာတ်ခွဲခန်းအပြုအမူအကဲဖြတ်။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 2008;16(2): 124-131 ။ [PubMed]
Riggs ရော်ဘာ, Greenberg MT, Kusche, CA, Pentz MA ။ မူလတန်းကျောင်းသားများအတွက်လူမှုရေး-စိတ်ခံစားမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်၏အမူအကျင့်ရလဒ်များအတွက် neurocognition ၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2006;70: 91-102 ။ [PubMed]
Roberti JW ။ အာရုံခံစားမှုရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝဆက်စပ်မှု၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်သုတေသနဂျာနယ်။ 2004;38: 256-279 ။
Romer: D, Betancourt L ကို, Brodsky NL, Giannetta JM, ယန် W က, Hurt ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအားနည်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုဆိုလိုပါသလား? အလုပ်လုပ်စွမ်းဆောင်ရည်, Impulse, စောစောမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအကြားဆက်ဆံရေး၏အလားအလာလေ့လာမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2011;14(5): 1119-1133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Romer: D, Betancourt L ကို, Giannetta JM, Brodsky NL, Farah M က, preadolescents အတွက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ပြဿနာအပြုအမူများ၏ဆက်စပ်မှုအဖြစ်အိပ်ချ်အလုပ်အမှုဆောင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် Impulse ညှငျးဆဲပါ။ Neuropsychologia ။ 2009;47: 2916-2926 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Romer: D, Duckworth AL, Sznitman S က, ပန်းခြံအက်စ်မြီးကောင်ပေါက် selfcontrol သင်ယူနိုင်ပါသလား? အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေထိန်းချုပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2010;11(3): 319-330 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Romer: D, Hennessy အမ်တစ်ဦးကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံရှာ၏မော်ဒယ် biosocial-ထိခိုက်စေ: ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2007;8: 89-101 ။ [PubMed]
Rueda MR, Rothbart MK, McCandliss bd, Saccamanno L ကို, Posner MI ။ လေ့ကျင့်ရေး, ရငျ့နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အာရုံစိုက်မှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2005;102: 14931-14936 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shamosh NA, DeYoung CG, အစိမ်းရောင် AE, Reis DL, ဂျွန်ဆင် MR, Conway Ara, et al ။ နှောင့်နှေးလျှော့အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: ထောက်လှမ်းရေးမှဆက်ဆံရေး, အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်နှင့် prefrontal cortex anterior ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2008;19(9): 904-911 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Greenstein: D, Lerch J ကို, Clasen L ကို, et al Lenroot R ကို, Gogtay N ကို။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဉာဏစွမ်းရည်နှင့် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သဘာဝ။ 2006;440: 676-679 ။ [PubMed]
Shonkoff JP, Boyce WT, McEwen BS ။ neuroscience, မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ, နှင့်ကျန်းမာရေးညီမျှမှုများ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအမြစ်များ: ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအသစ်တစ်ခုမူဘောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်။ 2009;301(21): 2252-2259 ။ [PubMed]
Slovic P ကို, Finucane M က, ပီတာ, E, MacGregor DG ။ အဆိုပါ heuristic အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ခုနှစ်တွင်: Gilovich T က, Griffin: D, Kahneman: D, အယ်ဒီတာများ။ အလိုလိုတရားသဖြင့်စီရင်: Heuristics နှင့်ဘက်လိုက်မှု () ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2002 ။
Sowell ER, Thompson ကလေး, Leonard CM, et al ။ သာမန်ကလေးတွေအတွက် cortical အထူနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ longitudinal မြေပုံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24(38): 8223-8231 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Tessner KD, Toga AW ။ postadolescent ဦးနှောက်ရငျ့စဉ်အတွင်းပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေး: မြေပုံကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် dorsal တိုကျရိုကျ cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆလျှော့ချရေးဆက်ပြောသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2001;20(22): 8819-8829 ။ [PubMed]
လှံကိုအယ်လ်ခုနှစ်တွင်: ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်အပြုအမူပုံစံများ: တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ချဉ်းကပ်။ ဆယ်ကျော်သက် psychopathology နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်: ပေါင်းစပ်ခြင်းကဦးနှောက်နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသိပ္ပံ။ Romer: D, Walker က EF, အယ်ဒီတာများ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2007 ။ စစ။ 9-30 ။
လှံကို L ကို, P ကို။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အမူအကျင့်မှ neuroscience ။ WW Norton & Co. , ။ ; နယူးယောက်: 2009 ။
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် Steinberg L. တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008;28: 78-106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Suomi SJ ။ အပြုအမူ၏အစောပိုင်းဆုံးအဖွတျ: မျောက်လေ့လာမှုများထံမှအထောက်အထား။ ဗြိတိန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1997;53: 170-184 ။ [PubMed]
Tarter RE, Kirisci L ကို, Mezzich တစ်ဦး, ကျောနလေိ JR, et al Pajer K ကို Vanyukov M က။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Neurobehavioral disinhibition ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါစတင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003;160(6): 1078-1085 ။ [PubMed]
Tarullo AR, Gunnar MR ။ ကလေးသူငယ်တို့ကိုမတရားသဖွငျ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ HPA ဝင်ရိုး။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2006;50: 632-639 ။ [PubMed]
Turner MG, Piquero AR ။ Self-ထိန်းချုပ်မှု၏တည်ငြိမ်မှုကို။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရေးဂျာနယ်။ 2002;30: 457-471 ။
Vaidya CJ, Bung လုပ် SA, Dudukoric မိုင်, Zalecki, CA, Elliott သည်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Gabrieli JD ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ ADHD အတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲအာရုံကြောအလွှာ: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပုံရိပ်ကနေအထောက်အထား။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2005;162(9): 1605-1613 ။ [PubMed]
Whiteside SP, Lynam DR ။ ငါး-Factor မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်း Differeneces ။ 2001;30: 669-689 ။
Wilens TE, Faraone SV, Biederman J ကို, Gunawardene အက်စ် atttention-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါလှုံ့ဆော်ကုထုံးနောက်ပိုင်းတွင်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဘွားတတ်သလော ကလေးအထူးကု။ 2003;111(1): 179-185 ။ [PubMed]
Williams က BR, Ponesse JS, Shachar RJ, Logan GD, အသက်တမ်းတစ်လျှောက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု Tannock R. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1999;35(1): 205-213 ။ [PubMed]
Zucker RA ။ အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်: ဘဝသင်တန်းဖုံးအုပ်တစ်ဦးက developmentalbiopsychosocial စနစ်များရေးဆွဲရေး။ ခုနှစ်တွင်: Cicchetti: D, Cohen ကို DJ သမား, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ psychopathology: Volume ကိုသုံး: အန္တရာယ်, ရောဂါနှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ ed 2nd ။ ယောဟနျသ Wiley; Hoboken, NJ: 2006 ။ စစ။ 620-656 ။
Zuckerman အမ် အမူအကျင့်အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့အာရုံခံစားမှုရှာ၏ biosocial အခြေစိုက်စခန်း။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1994 ။